Apex Educational Academy मा अब MBBS ENTRANCE सुरु सतप्रतिसत ग्यारेन्टी पास -
Apex Educational Academy मा अब MBBS ENTRANCE सुरु सतप्रतिसत ग्यारेन्टी पास
May 11, 2020 May 17, 2020 अखवार अनलाइनLeaveaComment on Apex Educational Academy मा अब MBBS ENTRANCE सुरु सतप्रतिसत ग्यारेन्टी पास
काठमाडौ पुतलीसडक स्थित Apex Educational Academy ले MBBS ENTRANC पढने विद्यार्थीहरुलाइ लक्षित गर्दै MBBS ENTRANCE कक्षाहरु सञ्चालन गर्ने भएको छ । विगत २० बर्षदेखि लोकसेवा तयारी कक्षामा इतिहास नै रच्न सफल Apex Educational Academy ले सतप्रतिसत ग्यारेन्टी सहित MBBS ENTRANCE सञ्चालन गर्ने तयारी पुरा गरेको छ । एपेक्समा अध्यायन गरी लोकसेवा पास गरेका विद्यार्थीहरु यतिबेला अभिभावक समेत बनेका छन । तिनै अभिभावकको तथा विद्यार्थीहरुको माग अनुसार अव APEX ले MBBS ENTRANCE कक्षाहरु सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । आफु एपेक्समा अध्यायन गरेर सफल भएको कारण आफना बालबच्चाहरुलाई पनि APEX मा नै अध्यापन गराउन पाए सफल हुने अभिभावकको माग भएका कारण APEX ले MBBS ENTRANCE का कक्षाहरु सञ्चालनका लागी तयारी गरेको छ ।
के हो APEX ?
विगत २० बर्षदेखि लोकसेवा तयारी कक्षाहरु सञ्चालन गर्दै आएको एक मात्र ऐतिहासिक संस्था हो । प्रतिष्ठित, दक्ष, विषयविज्ञ प्रशिक्षकहरु आवद्ध भएको संस्था । विशेषगरी एकेडेमिक ब्यक्तिहरु आवद्ध रहेको संस्था हो । अन्य संस्थाहरु हेर्दा ब्यापारीहरुले सञ्चालन गरेको पाइन्छ तर APEX मा भने सतप्रतिसत शैक्षिक क्षेत्रका बौद्धिक व्यक्तिहरुद्धारा सञ्चालन भएको संस्था हो ।
लोकसेवाको क्षेत्रमा यस संस्थाले इतिहास नै रच्न सफल भएको छ । यस संस्थामा अध्ययन गर्ने विद्याथीहरु सतप्रतिसत पास हुदै आएका छन । APEX ले विद्यार्थीहरुलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिदै आएको शैक्षिक संस्था हो । Apex Educational Academy मा नेपालका टप लेवलका कलेजमा अध्यापन गर्ने शिक्षकद्धारा अध्यापन गराइन्छ । APEX ले विद्यार्थी संख्यालाई भन्दा पनि अध्यापनको गुणस्तरलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेका कारण विद्यार्थीहरुका लागी लोकप्रिय बन्दै आएको छ ।
APEX मा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरु सरकारी क्षेत्रका विभिन्न उच्च श्रेणी कार्यरत छन । विद्यार्थीलाई दक्ष बनाउने यो संस्थाको उद्देश्य रहेको छ । विद्यार्थी संख्याका आधारमा कक्षा कोठा तथा समुहमा विभाजन गरी अध्यापन गराइन्छ । Apex Educational Academy विद्यार्थीहरुलाई सरल र बुझने तरिकाले दक्ष शिक्षकद्धारा प्रशिक्षण गराउदै आएको शैक्षिक संस्था हो । यस संस्थामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरु असफल भएको भन्ने कुनै रेकर्ड नभएको तथा कमजोर विद्यार्थी दक्ष नहुन्जेलसम्म अध्यापन गराउने भएका कारण यस संस्थामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरु सतप्रतिसत पास हुने गरेका उदाहरणहरु छन ।
APEX का विशेषता ?
विद्यार्थीलाई सरल तरिकाबाट धैरै ज्ञान दिलाउने एकमात्र शैक्षिक संस्था हो । यस संस्थामा लामो समयको अनुभव संम्हालेका शिक्षकहरुको समूह रहेको छ । APEX मा कुनै विजनेशमेन नभएर एकेडेमीक क्षेत्रका मात्र ब्यक्तिहरुद्धारा सञ्चालित भएका कारण ब्यापारिकण भन्दा पनि शिक्षाको गुणस्तरमा ध्यान दिइन्छ । पाठयक्रमका साथै व्यवहारिक पद्धतीबाट अध्यायन गराइदै आएको छ । जसका कारण विद्यार्थीहरुलाई सहज रुपमा विषयबस्तुमा केन्द्रित बनाउने छ । लामो समयदेखि लोकसेवाका तयारी कक्षाहरु सञ्चालन गर्दै आएको यस संस्थाबाट अध्ययन गरी नेपाल सरकारका विभिन्न सेवामा उच्च तहमा समेत APEX का विद्यार्थीहरु रहेका छन । निजामती, बैङकिङ, प्राधिकरण, इन्जिनियरिङ, शिक्षा लगायत जुनसुकै क्षेत्रमा पनि एपेक्समा अध्यायन गरेका विद्यार्थीहरुले नाम निकालेका छन ।APEX मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी नेपाल सरकारको उच्च ओहदा सचिव पदसम्म भएका छन । जसका कारण सफल विद्यार्थीका लागी एपेक्स नै रोजाइमा परेको छ ।
MBBS ENTRANCE लाई एपेक्स नै किन ?
एमविविएस इन्टान्स पढाउने थुप्रै संस्थाहरु छन । तर अरु संस्थाले विद्यार्थीलाई एमविविएस इन्टान्स कक्षाका नाममा मोटो रकम असुल्ने तर गुणस्तरीय शिक्षा अभावका कारण विद्यार्थीहरु सफल हुन सकेका छैनन । एउटै कक्षामा सयडेडसयको संख्यामा विद्यार्थीलाई भेडाखबाख्रा राखे जस्तै गरी खचाखच राख्ने जस्ता कारण विद्यार्थीहरु सफल हुन सकेका छैनन । APEX मा भने सीमित विद्यार्थीहरुलाई मात्र भर्ना लिने र एउटा कक्षामा सानो संख्या (६०) मा विद्यार्थी राखिने भएका कारण विद्यार्थीहरु सफल हुदै आएका छन । इन्ष्टिच्युडहरुले विद्यार्थीसंग चर्को मुल्य लिएर विद्यार्थी भर्ना गर्ने तर विद्यार्थीको पढाइ तर्पm ध्यान नदिने धेरै संस्थाहरु छन । APEX ले समय समयमा विद्यार्थीले एक्जाम लिने र फिडब्याक बुझने गरेका कारण कमजोर विद्यार्थीहरु पनि सतप्रतिसत सफल हुने गरेका छन । विद्यार्थीलाई कसरी सफल बनाउन सकिन्छ भन्ने नै APEX को विशेषता हो । विद्यार्थीको क्षमता अनुसार कक्षा निर्धारण गरी छुट्टै कोचिङको कक्षा सञ्चालन गर्नु नपर्ने गरी कक्षा व्यस्थापन गर्दै आएको छ । एपेक्समा भर्ना भइसकेपछि विद्यार्थीले अन्य ठाउमा धाउन पर्नेछैन यही नै हरेक पद्धतीबाट उसलाई दक्ष बनाउने APEX को विशेषता हो । यसका साथै गरीव जेहेन्दार विपन्न विद्यार्थीको वास्तविक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर कतिपय विद्यार्थीलाई निशुल्क पनि अध्यापन गराउदै आएको छ । २०७२ सालको भूकम्पपछि APEX ले भूकम्प पीडित विद्यार्थीहरुलाई ५० प्रतिशत छुटमा पढाएको रेकर्ड पनि APEX संग छ ।
एपेक्समा मा MBBS ENTRANCE पढाउने शिक्षकहरु कस्ता छन ?
Apex Educational Academy मा काठमाडौका नाम चलेका प्रतिष्ठित कलेजमा अध्यापन गर्ने सम्बन्धित विषयका विषय विज्ञ, बुक राइटरहरुद्धार अध्यापन गराइदै छ । जसका कारण विद्यार्थीलाई दक्ष बनाउन सफल बन्दैे छ । जस अन्तर्गत एमविविएस इन्टान्स कक्षाका
लागि सेन्ट जेभियर्स कलेजमा अध्यापन गराउदै आउनु भएका ज्योतीचन्द्र भण्डारी, अरविन्द झा, शुन्दर बराल, उमेश ठाकुर, विकास प्रजापति रहनु भएको छ । त्यसैगरी के एम सी कलेजमा अध्यापन गराउदै आउनुभएका होमकुमार दवाडी, त्रिनिटी कलेजका प्रमोद पाण्डे, लिटिल एन्जल कलेजका देविप्रसाद खरेल रहनु भएको छ ।
त्यसैगरी BOTANY तर्फ सेन्ट जेभियर्स कलेजमा अध्यापन गराउदै आउनु भएका नविना सिंह डंगोल, शुष्मा न्यौपाने, ब्रजेश श्रेष्ठ, यमिनी पन्त हुनुहुन्छ । त्यसैगरी नेवेल एकेडेमीमा अध्यापन गराउदै आउनुभएकी दिपा मास्के, युनिग्लोब कलेजका डिल्ली उप्रेती, अमृत साइन्स कलेजका सन्तोष लम्साल रहनुभएको छ ।
साथै CHEMISTRY तर्फ सेन्ट जेभियर्स कलेजमा अध्यापन गराउदै आउनु भएका खेमराज भट्ट, सरोज यादव, सन्जित शाह, सुशिला थापा, प्रवेश घिमिरे, श्रीकृष्ण ढकाल, त्यसैगरी एम्बिशन एकेडेमीका शुकदेव आचार्य, ग्लोबल कलेजका राजेश पौडेल, एसओएस कलेजका विराज तिमिल्सिना, त्रिनिटी कलेजका भेषराज सुवेदी, नोवल एकेडेमीका परमात्मा मिश्र, न्यु समित कलेजका कुमार सुवेदी रहनुभएको छ ।
त्यसैगरी PHYSICS तर्फ त्रिचन्द्र कलेजका होमबहादुर बानिया, काठमाडौ युनिभरसिटीका राजेश गुरागाई, सि सि आर सी का हरीचन्द्र अधिकारी त्यसैगरी सेन्ट जेभियर्स कलेजका हरि किशोर शाह, सजित चन्द्र शाक्य, रामशुन्दर मताङ, बाशुदेव घिमिरे, गोपाल झा, अजयकुमार कर्ण, विरेन्द्र प्रसाद पन्त, यज्ञबहादुर फुयाँल, र उत्तम अर्याल रहनुभएको छ । त्यसैगरी ENGLISH, GENERAL KNOWLEDGE (G.K) र APTITUDE TEST (I.Q) लागी नरेन प्रसाइ, मित्र घिमिरे, पिताम्बर रिमाल र HEALTH तर्फ डा. विवेक सिंह राठोर र भुदेव झा रहनुभएको छ । साथै Guest leacture Class को लागी INDIA , PAKISTAN लगायत विभिन्न मुलुकका विदेशी बरिष्ठ चिकित्सकहरुले पनि कक्षा लिने व्यवस्था गरिएको छ ।
MBBS ENTRANCE का लागि APEX नै किन ? हेर्नुहोस भिडियोमा
महिला नेतृ तथा महिला संघका महासचिव मन्जु खाँडद्धारा राहत बितरण
शिक्षामन्त्रीको दबाबमा ५०० निजी कलेजलाई सम्बन्धन
January 2, 2019 अखवार अनलाइन
मन्त्रीपरीषदको बैठक : यसवर्ष एसईई परीक्षा नहुने, आन्तरिक मूल्यांकनबाटै नतिजा
June 11, 2020 अखवार अनलाइन
नौ लाख विद्यार्थी गायब !
March 17, 2019 अखवार अनलाइन
आजदेखि एसईई परीक्षा, चार लाख ७५ हजार परिक्षार्थी सहभागी, साढे २९ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन
March 24, 2019 March 24, 2019 अखवार अनलाइन
स्नातक प्रथम वर्षको नतिजा सार्वजनिक, कति भए उत्तीर्ण
May 9, 2019 May 9, 2019 अखवार अनलाइन
शिक्षा क्षेत्रमा विसंगतिः १४ अर्ब वितरणको मापदण्ड नै छैन
April 14, 2019 अखवार अनलाइन